Community-Survey - Hope Clinic | Houston Multilingual Medical Services
We are conductingasurvey about how COVID-19 (also known as the Coronavirus) has impacted immigrants from Asia. The survey is expected to take about 15 minutes. All responses will be anonymous, which means we will not collect any information that would identify who you are. It is your choice whether to participate or not and if you choose not to participate, nothing will change with the services you receive at this health center. The same survey is also being done by patients of health centers in California and Washington states. The results of the survey will inform the health centers, our partners, and policymakers on the needs in our community.
Chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát về việc COVID-19 (còn được gọi là Coronavirus) đã tác động như thế nào đến những người nhập cư từ châu Á. Cuộc khảo sát dự kiến diễn ra trong khoảng 15 phút. Tất cả các phản hồi sẽ được ẩn danh, có nghĩa là chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào xác định quý vị là ai. Việc tham gia hay không là do quý vị lựa chọn và nếu quý vị chọn không tham gia, sẽ không có gì thay đổi đối với các dịch vụ quý vị thăm, khám tại trung tâm y tế này. Cuộc khảo sát tương tự cũng đang được thực hiện bởi các bệnh nhân của các trung tâm y tế ở các bang California và Washington. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ thông báo cho các trung tâm y tế, các đối tác của chúng tôi và các nhà hoạch định chính sách về nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta.
我們正在進行有關COVID-19(也被稱為新冠病毒)如何影響來自亞洲的移民的調查。問卷調查時間大約為15分鐘。所有回复都是匿名的，這是因為我們不會收集任何可識別您身份的信息。您可以選擇是否參加。如果您選擇不參加，您在此健康診所獲得的服務將保持不變。 加州和华盛顿州的社會健康診所也在進行了同樣的觀察活動。调查结果将使 社区诊所，服务中心 和社区领导者 对我们社区的需求有更好的了解。
COVID-19 (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟုလည်းလူသိများသော) ကပ်ရောဂါသည် အာရှမှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ များအား မည်သို့ သက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စစ်တမ်းကောက်ယူနေပါသည်။ ဤစစ်တမ်းသည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြာမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ဖြေဆိုမှုအားလုံးသည် အမည်မဖေါ်ထုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်သော မည်သည့် သတင်းအချက်အလက် ကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းမည် မဟုတ်ပါ။ ပါဝင်ခြင်း၊ မပါဝင်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ သင် မပါ၀င်ရန် ရွေးချယ်ပါက ဤကျန်းမာရေးဌာတွင် သင်ရရှိနေသော မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ပြောင်းလဲလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ အလားတူစစ်တမ်းကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် နှင့် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်များရှိ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများမှ လူနာများကလည်း လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ စစ်တမ်း၏ရလဒ်များသည် ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်ရွာလူထု၏လို အပ်ချက်များကို ပိုမို နားလည်ရန် အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်။